China JGNE 1000W Portable Power Station DC / AC Inverter ဖြင့် အရေးပေါ် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ထုတ်လုပ်သူများ |Goldencell
JGNE 1000W အိတ်ဆောင်ပါဝါဘူတာရုံ DC / AC အင်ဗာတာဖြင့် အရေးပေါ် ပါဝါထောက်ပံ့မှု
တွန်းလှည်းအိတ်ဒီဇိုင်း၊ ပေါ့ပါးပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး ဆိုက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ လျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပြောင်းရန် အဆင်ပြေပါသည်။
တင်သွင်းလာသော စွမ်းအားမြင့် အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ်များ၊ ပြုတ်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ မီးခံခြင်းနှင့် မိုးဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊
ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသော လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် ပါဝါမြင့်မားသော၊
စူပါပါဝါမြင့်စင် sine လှိုင်းအထွက်;
ထူးခြားသော အပိုဗို့အား၊ ဝန်ပိုမှု၊ ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်း၊ ဝန်ပို/ပိုလျှံ/ပိုအားသွင်း/ပိုလျှံမှု ကာကွယ်ရေး၊
AC 220V/110V pure sine wave အထွက်။
Goldencell မှ ထုတ်လုပ်သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို အသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။သင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လူသုံး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအား ပါဝါပေးရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် ခရီးသွားလာရန် လျှပ်စစ်လိုအပ်နေချိန်။ဒီဓာတ်အားပေးစက်ရုံသင့်လက်ပ်တော့ပ်၊ လျှပ်စစ်ကို ပါဝါပေးရန်အတွက် DC အထွက်၊ USB အထွက်နှင့် AC အထွက်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။အသုံးအဆောင်များ၊ မီးချောင်းများ စသည်တို့ကို အသုံးမပြုမီ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲကို သေချာဖတ်ပါ။ထုတ်ကုန်ကို မှန်ကန်စွာ သိမ်းဆည်းပြီး နောင်အကိုးအကားအတွက်။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အားသွင်းခြင်း- ပင်မလျှပ်စစ်၊ သင့်ကားနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် အားသွင်းပါ။(ဆိုလာပြားကို ရွေးချယ်နိုင်သည်);
အထွက်အမျိုးမျိုး- AC၊ DC နှင့် USB အထွက်များ။
အမျိုးမျိုးသော ဘေးကင်းရေး အကာအကွယ်များ- အားပိုဝင်ခြင်း၊ ပိုလျှံထွက်ခြင်း၊ အပူချိန်နှင့်overload ကာကွယ်မှု။
ဖန်သားပြင်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်- လက်ကျန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြသမှု၊ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ ပါဝါ၊ ရက်စွဲနှင့် အချိန်နှင့် အခြားအရာများ။
Built-in ဘလူးတုသ်- ကျန်အရာများကိုကြည့်ရှုရန် ၎င်းကို သင့်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။လျှပ်စစ်၊ ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ ပါဝါနှင့် ကုမ္ပဏီအချက်အလက်၊ စသည်တို့။
Lithium-Iron phosphate (LiFePO4) ဘက်ထရီအား ၎င်း၏ တာရှည် လည်ပတ်မှု သက်တမ်းအတွက် မြင့်မားသော၊ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သိပ်သည်းသောစွမ်းအင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ နှင့် ဘေးကင်းမှု။
● ပါဝါခလုတ်ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက်၊ AC အထွက်ပေါက်ကို ဖွင့်ထားပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းကို ပါဝါဖွင့်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ညွှန်ပြသော AC အထွက်အထွက်အခြေအနေ၏ ညွှန်ပြချက်သည် အစိမ်းရောင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။AC အခြေအနေကို အနီရောင် ညွှန်ပြနေချိန်တွင် AC output port သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်ကို ဆိုလိုပြီး ကျေးဇူးပြု၍ ခရီးဆောင်ပါဝါဌာနကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
● ဤခရီးဆောင်ပါဝါဌာနကိုအသုံးပြုပြီးနောက် ပါဝါခလုတ်ကို နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပဲ ပိတ်ပါ။
2. ဤထုတ်ကုန်အား မည်သို့ကောက်ခံမည်နည်း။
(1)AC အားသွင်းကိရိယာဖြင့် အားသွင်းခြင်း။
ဤထုတ်ကုန်အားအားသွင်းရန်အတွက် AC အားသွင်းကိရိယာ၏အဆုံးတစ်ဖက်ကို ဤပါဝါဘူတာရုံနှင့် အခြားတစ်ဖက်ကို အိမ်သုံး AC ပလပ်ပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ထုတ်ကုန်အား အားအပြည့်သွင်းသောအခါ၊ AC အားသွင်းကိရိယာသည် အစိမ်းရောင်ဖြင့် မီးလင်းလာပြီး AC အားသွင်းကိရိယာအား အချိန်မီ ပလပ်ဖြုတ်ပါ။
● နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ပြင်းထန်သောနေရာများတွင် ဆိုလာပြားများကို တတ်နိုင်သမျှထားပါ။
● ပါဝါဌာနအား အားသွင်းရန် ဆိုလာပြား၏ အထွက်အား အိတ်ဆောင်ပါဝါဌာန၏ အားသွင်းအဝင်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
(3)စီးကရက်မီးခြစ်အတွက် 12V car socket မှတဆင့် အားသွင်းပါ။
ကားအားသွင်းကိရိယာ၏ အဆုံးကို ဤထုတ်ကုန်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ပါဝါဌာနအား အားသွင်းရန်အတွက် သင့်ကားရှိ စီးကရက်မီးခြစ်အတွက် အခြားတစ်ဖက်ကို စကတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ကားအားသွင်းကိရိယာရှိ မီးစိမ်းသည် ပါဝါဘူတာရုံအား အားအပြည့်သွင်းထားကြောင်း ညွှန်ပြပြီး ကျေးဇူးပြု၍ ကားအားသွင်းကိရိယာအား အချိန်မီ ပလပ်ဖြုတ်ပါ။
သတိပေးချက်- သင့်ကားဘက်ထရီ၏ မတော်တဆလျှပ်စစ်ဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်၊ အားသွင်းနေစဉ် ကားအင်ဂျင်လည်ပတ်နေပါစေ။
3. ဤထုတ်ကုန်အား စက်ပစ္စည်းများကို ပါဝါအသုံးပြုနည်း
(1)AC လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပါဝါပေးနည်း
သင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှ ပါဝါကေဘယ်ကြိုး၏ ပလပ်ကို ဤပါဝါဌာန၏ AC အထွက်ပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းအား ဤဘူတာရုံအား ပါဝါဖွင့်ခွင့်ပြုရန် ပါဝါခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ။
(2)USB မှတစ်ဆင့် စက်ပစ္စည်းများကို ပါဝါသွင်းနည်း
သင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ တပ်ဆင်ထားသော USB ကြိုးကို ဤပါဝါဌာန၏ USB အပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ၊ ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ၊ ထို့နောက် ဤဘူတာရုံသည် သင့်စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်နစ်စက်ပစ္စည်းများကို USB မှတစ်ဆင့် ပါဝါပေးမည်ဖြစ်သည်။
(3)DC 12V စက်ပစ္စည်းများကို ပါဝါသုံးနည်း
သင့်စက်ပစ္စည်းကို ပါဝါဌာနရှိ DC 12V အပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းကို ပါဝါရရှိရန် ပါဝါခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ။ဤထုတ်ကုန်၏ DC 12V ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် plug-and-play ဖြစ်သည်။
(4)အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ကားဘက်ထရီကို ဘယ်လိုအားသွင်းရမလဲ
သင့်ကားဘက်ထရီကို ဤပါဝါဌာနရှိ DC 12V အပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီး သင့်ကားဘက်ထရီအား ပါဝါပေးရန် ပါဝါခလုတ်ကို ဖွင့်ပါ။ဤထုတ်ကုန်၏ DC 12V ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် plug-and-play ဖြစ်သည်။
အောက်ပါတို့သည် LFE CELL ၏ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်သည်။
ယခင်- စွမ်းရည်မြင့် NCM 26650 3.6V 5000mah အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ နက်ရှိုင်းသော စက်ဝန်း 26650 လီသီယမ်အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ EV UPS ဘက်ထရီ
နောက်တစ်ခု: AC Power Station Pure Sine Wave Portable Powering Car Refrigerator TV Drone Laptops
HESS 10KWh ပါဝါနံရံ LiFePO4 လီသီယမ်ဘက်ထရီ ...
AC 220V/110V Pure Sine Wave Output Portable Pow...
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ UPS Inverter ဘက်ထရီ 12V...